CANNA: SIFOOYINKA BEERITAANKA IYO DARYEELKA EE BERRINKA BANNAAN - QEYBINTA DHALASHADA EE RHIZOME
Ugu Weyn Ee Qeybinta dhalashada ee rhizome
Kanna: sida loo daryeelo loona koro ubax
Marka la eego marwalba cimilada kulaylka ah, ubax kasta wuxuu doonayaa inuu u guuro beertiisa. Ma aha wax la yaab leh in guntu ay soo jiidato isha oo leh caleemo cufan iyo ubaxyo jilicsan. Diidmada asaasiga ah ee dhirta kale, waxay u muuqdaan inay yihiin kooxda, sababtoo ah xaaladaha wanaagsan waxay u fidiyaan ilaa laba mitir iyo nus. Haa, iyo xannaanadu ma aha mid soo jiidasho leh. Xumadahooda oo kaliya - dulqaadka qabow. Waa maxay jacaylka iyo doorka ay ka ciyaaraan jeexjeexyada naqshadaynta muuqaalka, isku day inaad ogaatid.
Halka uu jiro qalaad sida, waxaa had iyo jeer saameynaya muujinta midabka. Waxaa la abuuray thanks to caleemaha midabka caleemaha wax caleemo leh: laga bilaabo cagaaran cagaar ah si burgundy mugdiga iyo bronze, iyo sidoo kale dhar-cas, casaan, jeexjeexyada inflorescences. Warshadu waa mid aan qabyo ahayn, si sahlan ayaa loo adkeeyaa abaarta, ubaxyada dabayaaqada Juun ilaa dhaxan ugu horreeya, dhif ah xanuunsan. Faa'iido kale - isbahaysiga dufanka ballaaran ee barxadda ku urursan kaydka nafaqooyinka.
Ma taqaanaa? The Indians qadiimiga ah ee raadinaya fitamiinada waxay cuneen caleemaha cannuun ee cufan leh, iyo dushooda succulent si joogto ah u quudin jiray lo'da.
Waddanka dhaqanku waa kulaylaha iyo jilibyada Mareykanka, Jasiiradaha Caribbean, Hindiya iyo Shiinaha. Qummanka dheer ee afkoda, ellipsoid wuxuu baxaa 80 cm oo dheer iyo 30 cm ballaaran, ubaxyo waaweyn oo asmmo ah oo ka mid ah geedka ayaa ka codsaday badmareenada reer Portugal, kuwaas oo u keenay Europe qarnigii 15aad.
Haddii aad si dhow u eegto, waxaad ka heli kartaa mid la mid ah muuska, iris, gladiolus iyo xataa orchid ee ubaxa. Canna ma aha dhexdhexaad, oo waxay leedahay jilib kaliya oo xisaabinaya ilaa konton nooc. Martida kulaylaha ayaa leh waxoogaa faa'iido: la'aanta carafo inta lagu jiro ubax iyo caabbinta barafowga liita. Hase-yeeshee, wax-qabadkaas yar-yar ayaa ah mid aan caqli ahayn si loo helo dhaqan qaas ah.
Doorashada goob degen oo loogu talagalay guntinta
Iyadoo soo iibsaday dalagyada la doonayo, bacrimin isla markiiba waa la yaabay: meesha iyo sida loo abuuro cannabis. Laakiin wax walba waa sahlan tahay. Marka aad dooranayso goob degaan ah, waa ku filan in la tixgeliyo isbarbardhigga jawiga kulaylaha iyo iska caabinta sabirka qabow ee geedka. Wuxuu ku raaxeysan doonaa meel bannaan oo qorrax leh. Noocyo dheer (caleemo dherer ah ilaa 90 cm ayaa loo tixgeliyaa hoosta) waxay u baahan yihiin ilaalinta dabaylaha iyo qorshayaasha - gusts xoog leh waxay jebin karaan suunka suunka. Xaaladahaas oo kale mustaqbalka, waxaad u baahan kartaa taageerooyinka beerta. Hoyga, dakhliyada bukaannimada ayaa doortay glades caansaan ah oo ku yaalla beeraha iyo kaydka. Dhulkeena, waxay si fiican u iftiimayaan oo bannaan yihiin. In hooska, waxay sidoo kale qaadan doonaa xidid, laakiin waxay u egtahay inay ku farxaan ubaxyada.
Gangnam, maadaama ay dhirta aysan aheyn kuwo qalalan, xaalado gaar ah looma baahna. Kobaca degdega ah iyo ubax waxay siin doontaa iyaga oo leh qoyaan, qoyan oo buuxa iyo ciidda dabacsan, dabacsan. Laakiin haddii aan la helin, seedling waxay xidid ku qaadan doontaa carrada la oggol yahay. Bannaanka waaya-aragnimada leh, qabashada dhaqanka, waxay kicisaa koritaanka. Waxaan ku guuleysanay inaan soo aruurinno talooyinka ugu faa'iidada leh:
ka hor inta aan lagu beerin sariiraha si qoto dheer loo qodo, humus waa in lagu daraa (qiyaastii 4-5 kg ​​halkii mitir);
laga bilaabo qaybo siman oo ka mid ah ciid adag, carrada caleen iyo peat si ay u sameeyaan isku dar ah khaas ahaan dhaqanka;
kabka dhulka hoostiisa ilaa 40 cm oo isku dhafan oo lakab oo leh lakab oo ku jira 7 cm. Si aad u hayso qoyaan ka dib beerashada, waa lagama maarmaan in mulch;
Taas beddelkeeda, "barkad kulul" waxaa loo diyaarin karaa xididada: in ka badan 15 cm oo digada ah ayaa lagu shubay hoose ee 70-santimitir ee niyadjab, iyo si deeqsinimo ah ku dul rusheeyeen.
Ma taqaanaa? Sida halyeeyga u leeyahay, canna wuxuu ku koray goob lagu dabaasho, halkaas oo hoggaamiyihii Hindiya uu dab ka kacay heshiiskii nabadda, isagoo isdaba-mariyay ciidan millatari.
Geedka canna ah
Si aan u lumin wakhtiga waqti leh markaad dhali kartid ubax dhul furan, ha ku degdegin. Haddii dhaqanku uu ka badbaado heerkulka heerkulka ah, waxay u fadhiisan doontaa waqti dheer oo ah koritaanka iyo dib u dhigista gaysashada, iyo kiiskii ugu xumaa, inflorescences kama muuqan doono dhammaantood. Iyo waayo baxsasho daciif ah, waa wax ka qabta dareenka cudurada kala duwan. Qaar ka mid ah beeraleyda ubaxyada ah waxay tixgeliyaan qeybta labaad ee Maajo mudo ku habboon. Laakiin xaqiiqdii, go'aanso dhammaan xaaladaha cimilada. Geedka canneyntu wuxuu dhacaa guga kadib marka uu dhammaado dhaxan ee ubaxyada diyaarsan. Waxaa la rumeysan yahay in this dilka ah waa in la beeray habeyn leh qajaarka, sababtoo ah waxay leeyihiin shuruudo badan oo guud.
Nalalka dabacsan ayaa la riixay qoto dheer oo ah 10 - 15 cm, kuwa aan haysan waqti ay ku qaataan xididada, lama beeray qoto dheer 9 cm. Masaafada u dhaxaysa tijaabooyinka ayaa go'aamiya dabeecadaha kala duwan. Noocyo qallafsan, 40 x 40 cm ama 40 x 60 cm ayaa inta badan loo adeegsadaa, iyo qiyaasta dheer - 70 x 70 cm. Marka laga reebo, cufnaanta 30 x 30 cm waxaa loo oggol yahay meelaha yaryar.Qalabka tiknoolojiga go'aamiya sida loo beerto xayawaanku waxay ku xiran tahay habka dhalashada. Mawduucan, waanu soo noqon doonaa.
Sidee si haboon u daryeeli karnaa bustaha berrinka bannaan
Wixii koritaanka iyo dhirta ubax goos goosta waxay u baahan tahay xaalado gaar ah: kuleylka, waraabinta joogtada ah, dabcinta ciidda iyo jaridda dhirta. Haddii waxaas oo dhan la hubiyo, hal iyo badh - laba bilood ka dib marka la beerto ubaxyada ugu horreeya ayaa soo baxaya. Nasiib darro, way yar yihiin. Fogaanta badan ee ubaxa waxay kicisaa jeexjeexyada burooyinka yar yar ee peduncle.
Sida loo isticmaalo biyaha
Laga soo bilaabo xilliga beerto si ubax, baadiyaha waa in si dhexdhexaad ah loo waraabiyo. Geedo yar yar oo ku habboon tobanka maalmood ee ugu horeeya ka dib markii laga beerto dhul furan oo biyo ah oo leh xal of kaneecada.
Iska ilaali qoyaanka xad-dhaafka ah. Ujeedadaas, marka ubaxa beerta la beeray, waxay ilaaliyaan qiyaasta ku filan ee dheecaanka ee substrate ah iyo dib u furi waqtiga. Deegaanka cayriinka, fangaska kala duwan ayaa si firfircoon u kobcaya, taas oo dhaawici karta cannas. Caabuqyada infekshanku waa la gooyaa iyada oo aan laga reebin. Warshadu waxay horumarin doontaa liidashada ciidda qallalan. Duufaaniinka daaqa ah ayaa uumi baxda qoyaan, sii deynaya dhoobada caleemaha.
Ma taqaanaa? Dadku waxay arkeen: marka canna baxo "oohin", waxaa habboon in isku diyaariso roobka.
Inta lagu jiro ubax, kordhinta waraabinta, iyo marka imaansho qabow, xilliga dayrta, la yareeyey. Marka guntigu furfuran yahay, gabi ahaanba joojiya. Biyaha waraabka waa inay ahaadaan kuwo kulul. Waxaa fiican inaad horey u soo qaadatid baaldi oo u oggolow in ay degaan.
Bacriminta iyo dhar xidhashada
Cannes ee beeritaanka iyo daryeelka ee bannaanka u furan ma aha dhibaatada oo dhan. Waxay u baahan yihiin quudin dheeraad ah inta lagu jiro xilliga sii kordhaya ee aan ka badnayn saddex jeer. Waxaa fiican in la sameeyo isla markiiba ka dib markii laga beerto, oo leh inflorescence ee inflorescences iyo inta lagu jiro ubax. Si tan loo sameeyo, qaso nitrogen, karash, Bacriminta fosfatoorka ah ee saamiga 12:10:25 g oo ku kala dhex mari duurka ka dib roobka ama waraabinta. Sidaas darteed granules si fiican u kala diri, ciidda waa la furfuray. Dharka ugu horeeya waxaa la samayn karaa oo kaliya kaliya Bacriminta-bacrimin-nitrogen, iyo soo socda ee Bacriminta fosfat-potassium, ama waqti kasta si loo yareeyo qadarka nitrogen. Wixii ubaxa noqon doonaa mid waxtar leh in la beddelo u dhexeeya macdanta iyo Bacriminta organic. Sida organics oo la qasiqiyey dhibco digaag ah, xayawaanka xayawaanka guriga.
Laga bilaabo shaqo bilaabidda dufka nadiifinta iyo kaydinta xilliga jiilaalka waa inay ahaadaan dayrta xilliga hore. Marka uu qaboobo, ubaxa si taxadar leh ayaa loo xoqay si uu uga ilaaliyo ka qaboojinta.
Waa muhiim! Haddii wakhti aysan ku dhufanin geedka, xilliga qaboobaha, rhizome waxaa saameyn kara kallana.
Xilliga dayrta ee macaamiisha kuleylka ah ee kuleylka ah ayaa u dhimanaya. Caleemaheeda si degdeg ah ayay u noqotaa madow waxayna noqotaa curyaan. The afkoda ayaa la jaray heer 20 - 25 cm dhulka, iyo tuber leh xididdada ayaa si taxadar leh loo qoday.
Ogaanshaha sida loo xannaaneeyo sanka jiilaalka, waxaad awoodi doontaa inaad ku hayso rhizomes dhan ilaa guga. Xaalado muhiim ah oo ay sugayaan kuleylka. Tani, ubaxlayaashu waxay soo jeedinayaan fursado badan oo kala duwan:
saar xididdada qoday boorso balaastig ah oo ku buufin biyaha sida ciidda u engegan;
dhig digriiga dhulka, ma u oggolaanayo in ay taabtaan, sanduuq leh dhoobada peat (waxaa lagu beddeli karaa peat ama perlite);
ku rusheey xididada sanduuqa sanduuqa qoyan ama balka (dhuumaha aan shaqaynayn).
Xaaladaha oo dhan, gudaha hoose, meesha aad ka geli karto xayawaanka, heerkulka hawadu waa inuusan ka badneyn 13 ° C iyo hoos u dhac 7 ° C Sida ugu fiican qolka si fiican u hawo leh leh iftiin kala duwan, hubso in qoyaanka dhulka dhoobo ay tahay heer ka mid ah 50%. Iska hubi digriiga waqti ka waqti. Haddii aad aragtid caleemaha xididdada, gooyso aagga ay aafoobeen si ay u noolaadaan una daweeyaan geesaha haray ee iodine.
Qaar ka mid ah growers ubax, maqnaanshaha ee maqaasiinka, canninkana ku duub ilaa guga balakoonka. Xilliga dayrta, ka dib marka la qodo rhizome, si taxadar leh uga saara dhulka, waxaad ku biyo raaci kartaa xal of kaneecada, ku qalaji si fiican oo kaydi, ku duuban kasta oo waraaq ah oo kala duwan, qaboojiyaha. Kuwa kale, si ay uga fogaadaan fara-xiiran leh xididada, iyaga ku beeray dheri oo lagu hayo guriga.
Si aad u faafiso dhaqanka labo siyaabood: koraan miraha ama u qeybso rhizome.
Marmar dhif ah ayaa loo isticmaalaa, sababtoo ah nidaamku waa waqti qaadashada iyo waqti qaadashada. Ka hor inta aadan beerin abuurka canna, si aad u jilciso qolof adag, waxaa lagu daaweeyaa biyo karkaraya oo diirimaad badan ku hayaan in ka badan shan saacadood. Sidoo kale, qolofku wuxuu ku jajabiyaa saameynta hargabka. Xaaladdan oo kale, hadhuudhka ayaa la geliyaa qaboojiyaha ilaa saacad ama laba. Ka dib markii la mariyo geedi socodka. Xilliga ugu wanaagsan waa Febraayo. Abuurka loo diyaariyey waxaa lagu aasaa qalalan iyo diiran (ilaa 23 ° C) dhulka. Marka caanaha taranku sidan oo kale, caleemaha ugu horreeya waxay u muuqan doonaan wax aan ka horeyn saddex toddobaad. Waqtigaan oo dhan sanduuqka leh "sariir" waa in uu ku istaago penumbra. Sanduuqa dusha sare ayaa lagu dabooli karaa galaas ama filim, taasoo abuuraysa saamaynta aqalka dhirta lagu koriyo. Marka caleemaha 3-4 lagu arko caleemaha yar yar, waxaa lagu beeray weel gaar ah oo lagu hayaa heerkul ah 15 ° C. Qeybta labaad ee Maajo, geedo ayaa loo rogi karaa in la furo dhulka. Faa'iido la'aanta habkani waa badbaadinta liidashada dabeecadaha kala duwan.
Waa muhiim! Dhamaan noocyada kala duwan ee caanaha soo saaraan miraha.
Habka qaybinta Root
Habkani waa mid sahlan oo sahlan. Guga, hubin in aysan jirin kareemka on rhizomes of cannas, waxaa loo qaybin karaa dhalmo. Tani waxay dooran kartaa digriiga awood leh.
Iska yaree mindi fiiqan, ka tag hal dhibic kobcinta qoryaha jarjaran. Cidhifyada qaybaha waxaa lagu daaweeyaa ash qoryo ama xal of Kansar nafaqo (0.2 g halkii 1 l oo biyo ah). Wixii kalsooni ah, delenki ku meeleeyay dheriyo leh ciid diiran, waraabiyey iyo ku riday qolka. Aad ayay u fiicantahay in la isticmaalo ujeeddo qoto dheer oo sanduuq balaastik ah oo leh fur. Iyaga oo ah xididdada ugu horeysa waxay u muuqdaan kuwo dhaqso badan Blooming Gangnam wuxuu siin doonaa beeritaanka dhirta caleemaha dhalinyarada. Ka hor inta muuqaalka ah caleenta on iyaga, ma aha lagama maarmaan in la degdega leh beeritaanka dhaqanka ee dhulka u furan. Habkani waxaa loo isticmaalaa beeraleyda intooda badan, sariiro sariiro leh caleemo cusub saddexdii sanoba mar. Haddii aad qabatey ubax dhoobo, dhirbaaxo gasho ka hor intaadan u qaybin oo aad ka tagto si aad u jiifsato maalin.
Caleemaha Canna waxay mararka qaar lumiyaan saamaynta qurxinta iyada oo loo marayo qaladka looxyo, slugs, caarada caarada, iyo dabaysha. Marka ay la dagaallamaan, sunta cayayaanka ayaa si fiican u xaqiijiyay.
Fungi kala duwan, bakteeriyada, fayrasyada, saameeya duurka, waxay isku dayaan inay dareemaan jilicsan, jaale ama madow madow. Dhammaan qaybaha geedka ayaa halis ugu jira. Caleemo iyo buro dhaawac ah ayaa jeexa oo gubi, badbaadinta duurka deriska ah. Si looga hortago dhibaatooyinkooda, waxaa lagu shubay manganese xal. Dhuxul waxaa lagu daaweeyaa buufin fungusidal ah. Waxa kale oo loo isticmaali karaa ujeedooyin qarsoodi ah. Sababta cudurku wuxuu ku jiraa qoyaanka xad-dhaafka ah.
Caleemaha martida kuleylka ah waxay jecelyihiin inay cunaan nematodes. Shayada kuleylka ah ayaa la tuurayaa. Iyo carrada agagaarka waxaa lagu daaweeyaa daawada loo yaqaan 'prophylaxis' oo leh hab gaar ah oo lagu iibiyo meelo kala duwan.
Canna ee naqshada muuqaalka
Ubax Tani waxay si fiican u heshaa sariirta leh dhaqamada kale. Intaa waxaa dheer, la jaanqaadaya iyaga ayaa kuu oggolaanaya inaad abuurto is-khilaafyo waaweyn. In gogol ubax gogol ah la eego ku dhowaad dhammaan dhirta. Waxa ugu muhiimsan waa in la tixgeliyo sifooyinka koritaanka iyo daryeelka marka la deminayo.
Naqshadeynta muuqaalka, dhererka dheeraadka ah waxaa loo isticmaalaa sidii dallad, oo ay ku xayndaabaan waddooyinka beerta, ama abuuraan kala soocista asalka qaanuunka cagaaran. In beerta ubaxa eland ma noqon doono mid adag oo meel kasta. Iyada oo qurxinta, naqshadeeyayaasha badanaa waxay maskaxda ku hayaan meelo jilicsan ee beerta. Xaqiiqooyin aad u firfircoon ayaa ka muuqda balliga, habka, xaaladaha noocaas ah waxay u dhow yihiin kuwa ay awoowayaashoodu koraan.
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Qeybinta dhalashada ee rhizome 2019